किन ल्यापटपलाई स्लीप मोडमा राख्नु हुदैन?
काठमाडौँ। प्रविधिको सन्सारमा कलेज देखि कार्यलय सम्म सबै ठाँउमा ल्यापटपको प्रयोग हुन्छ। प्रयोगकर्ता यसलाई जहाँ पनि प्रयोग गर्न सक्छन्। टेक कम्पनीहरुले प्रयोगकर्तालाई धेरै भन्दा धेरै सुबिधा दिन ल्यापटपमा वाई-फाई र स्लीप मोड जस्तो खास फीचर्स दिएको छ।
ल्यापटपमा कतिपय आगो लागेको घटनाको अनुसन्धानमा स्लीप मोडमा राख्नुको कारण पत्ता लगेको छ। यस मोडमा ब्याट्रीलाई हानी पुग्छ।
विशेषज्ञको अनुसार ल्यापटपलाई स्लीप मोडमा रख्नुको सट्टा सटडाउन गर्नु नै राम्रो विकल्प हुन्छ। प्रयोगकर्ताहरु बारम्बार ल्यापटप खोल्न र बन्द गर्न लाग्ने समय बचाउनको लागी स्लीप मोडको प्रयोग गर्छन्। ल्यापटपलाई लामो समय सम्म चलाउदा पनि यो डिभाइस आफैं स्लीप मोडमा जान्छ।
यूजर्स ल्यापटपलाई स्टार्ट बटनबाट पनि स्लीप मोडमा राख्न सक्छन्। यो फीचरले ल्यापटपको ब्याट्रीमा पनि जोड पर्न जान्छ जसबाट आगोलाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ।
लामो समयसम्म ल्यापटपलाई स्लीप मोडमा राख्नु हुँदैन किनकी यसले ब्याट्री लाईधेरै हानी पुग्छ। स्लीप मोडमा लोड धेरै हुनाले ब्याट्री छिटो खराब पनि हुन्छ। स्लीप मोडले ल्यापटपको सिपियु र मोनिटर पनि खराब बनाउछ। स्लीप मोडबाट ल्यापटपको ब्याट्री तातो हुन्छ र ल्यापटपको तापक्रम बढ्छ जसले आगो लग्न सक्छ।
स्लीप मोडले ल्यापटपको ब्याट्रीको खपत कम हुन्छ साथै डिभाइसलाई फेरी अन गर्नुपर्दैन। यूजर्स स्लीपिङ मोड मार्फत कामलाई निरन्तरता दिन सक्छन्। ल्यापटपलाई धेरै चार्ज गर्यो भने पनि ब्याट्रीको तापक्रम बढ्छ र आगो लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
ल्यापटपमा स्लीप मोडको सट्टामा हाबरनेसन मोड प्रयोग गर्न सकिन्छ। साथै यस मोडले ल्यापटपको ब्याट्रीलाई कुनै नोक्सानी हुदैन।
यो फीचरले ल्यापटपमा गरिरहेको कामलाई स्न्यापसट विन्डोमा सेभ गर्न सक्छन्। हाइबरनेसनले स्लीप मोडको तुलनामा राम्रो काम गर्छ। साथै यस फिचरले ल्यापटपको ब्याट्री पनि बढाउछ।
काठमाडौँ। प्रविधिको सन्सारमा कलेज देखि कार्यलय सम्म सबै ठाँउमा ल्यापटपको प्रयोग हुन्छ। प्रयोगकर्ता यसलाई जहाँ पनि प्रयोग गर्न सक्छन्। टेक कम्पनीहरुले प्रयोगकर्तालाई धेरै भन्दा धेरै सुबिधा दिन ल्यापटपमा वाई-फाई र
१३ लाख डलरमा बिक्यो विश्वकै खतरनाक ल्यापटप
अमेरिका । विश्वकै खतरनाक ल्यापटप १३ लाख डलरमा विक्री भएको छ । यो ल्यापटपको अनलाइनमा लीलाम विक्री भएको हो । सामसुङको यो ल्यापटपमा विश्वका सबैभन्दा खतरनाक भाइरस छन् । सामसुङ एनसी१०
ल्यापटप चोरेर चोरले पठायो भावुक इमेल !
काठमाडौँ। मानवीय समवेदना या नराम्रो काममा पनि इमान्दारिताका कहिले काँही घटना हामीले पढने र सुन्ने गरेका छौ। बेलायतको ब्रिमीङघममा हालै यस्तै एउटा ल्यापटप चोरी घटना अहिले चर्चाको विषय बनेको छ। अहिले
‘एक शिक्षक एक ल्यापटप’ अभियानमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको साथ
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक लि. र आईसीटी इन एजुकेशन नेपाल प्रा.लि.बीच सम्झौता भएको छ । बैंकका अनुसार नेपालका सरकारी, सामुदायिक तथा निजी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने तथा शिक्षण सिकाइकार्यमा